Xukuumada Somalia oo si adag u Cambaareysay Qaraxii ka dhacay Boqortooyada Saudi Arabia | Radiomaanta.com
You are here » Radiomaanta.com » Wararka » Xukuumada Somalia oo si adag u Cambaareysay Qaraxii ka dhacay Boqortooyada Saudi Arabia
Xukuumada Somalia oo si adag u Cambaareysay Qaraxii ka dhacay Boqortooyada Saudi Arabia
Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa si adag u cambaareysay Qaraxii shalay ka dhacay dalka Saudi Arabia kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 17-qof oo ay ku jireen askar ka tirsan ciidamada amaanka dalka Sucuudiga.
Argagaxisadu waxay muujiyeen inay ka soo horjeedaan waxay diinta islaamka ay fareyso, iyagoo qarax ku weeraray dad rayid ah iyo ciidammo ku sugnaa Magaalada Abha oo ah Xarunta Gobolka Asir.
Shacabka iyo xukuumadda Boqortooyada Saudi Arabia, waa Walaalaha iyo Saaxiibada dhabta ah ee Shacabka iyo Xukuumadda Somalia, run ahaantii waxaan dareemeynaa xanuunka iyo khasaaraha gaaray, waxaanu si xoog badan u taageereynaa dadaalada adag ee Boqortooyada Sucuudiga ay kaga hortageyso argagaxisada kuwa gudaha iyo dibadda intaba .
War-saxaafadeedka DFS ayaa lagu xusay in Argagaxisadu ay tahay muuqaal soo banbaxay oo caalami ah, ujeedkiisuna yahay burburinta dhabaheena nabadda ee nolosha, wuxuu abuuraa fatqalalo halis ku ah fahamka saxda ah ee diinteena quruxda ah ee Islaamka oo tilmaameysa nabadda , xushmadda iyo midnimada dadka dhexdooda , iyadoo aan la eegeyn kala aragti duwanaanshaha.
Xukuumadda Federaalka Somalia waxay ku howlan tahay si aan hakad laheyn inay u jiirto baraha ugu dambeeya ee argagaxisada ku leedahay gudaha dalka, waxaanu xoojineynaa iskaashigeena ammaan aanu la leenahay Boqortooyada Saudi Arabia si loo baabi’iyo shar-sidaha ka jira dhulalkeena.
Ugu dambeyn, Xukuumadda iyo Shacabka Somalia waxay u rajeynayaan Xukuumadda iyo Shacabka walaalaha ah ee Boqortooyada Saudi Arabia guul joogta ah iyo Barwaaqo.
« Axmed Madoobe oo aan ka qaybgelin shirkii maanta ka bilowday Degmada Doolow (Daawo Sawirada)
Madaxweynaha Somalia oo ka Hadlay Mooshin ay ka Gudbiyeen Xubno ka tirsan Baarlamaanka »